U-shaqeynta PCA Meel Kasta oo Cayaar Vista ah | Martech Zone
Shaqada loogu talagalay PCA meelkasta oo Cayayaan Vista ah
Sabtida, Juun 7, 2008 Jimco, Juun 10, 2009 Douglas Karr
Ma aanan arkin wax LiveUpdate ama dukumiinti ah oo ku saabsan cayayaankaan, laakiin sida muuqata way saameyneysaa kuwa kale ee isticmaala PCA meel kasta oo Vista ah sidoo kale. Halkii aad sugi lahayd Symantec si aan ula imaado hagaajin, waxaan gartay in mishiinka wax bixiya, Winawe32.exe uu sababayo dhibaatada.
Midig-u-riix batoonkaaga oo xulo Task Manager.
Xulo tabta Nidaamka.
Muuji Winawe32.exe oo guji Dhammaystirida Nidaamka.
Markii laguu digo, guji Haa.
Xidh PCA meelkasta.
Dib ugu fur PCA Meelkasta oo waa inaad aragtaa dhammaan Remote-kaaga hadda.
Fiicnaan laheyd haddii Symantec waxay ku xallisay cayayaanka PCAnywhere, waa xanuun dhab ah.
Tags: androidkaararkashaneemowaxyaabaha dhiirrigelinta dhacdadahel xisaabaadka twitter-kawarshadaha mobiladaadvertising dibaddausb drives
Weligaa Blogging Kama Noqon doontid
WordPress: Maaree Xayeysiiska Ad-minister
Aug 22, 2008 at 5: 48 AM
Issue ayaa lagu hagaajiyay pcA meelkasta 12.5. Hadda waa beta hadda http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Waa tan waxa dhacaya:
Maamulaha pcAnywhere (winaw32.exe) wuxuu bilaabayaa SessionController.exe. Haddii winaw32.exe ay ka baxdo ka hor inta uusan kullankacontroller.exe raran, markaa waxay ku dhalaysaa shaashad maran. Tani waxay dhici kartaa haddii nidaamku mashquul yahay waqtiga pcaw32.exe uu bilaabmayo.
Haddii tani si joogto ah u dhaceyso, ka dibna isku day inaad bilowdo SessionController.exe marka hore, sug dhowr ilbiriqsi ka dibna bilow maamulaha pcAnywhere. Tani waa inay shaqeysaa.
Sep 16, 2008 at 6: 36 AM
Arrintaan waxaa lagu hagaajiyay pcA meel kasta oo laga sii daayo 12.5 beta beta.Waxaad isku dayi kartaa xaaladdan xitaa haddii nidaamkaagu mashquul yahay.
Sep 28, 2008 at 10: 49 AM
Marka, 12.1 ee aan bixiyay ma shaqeynayo, mana jirto wax xusid ah oo balastar ah oo laga heli karo symantec.com. Aan ku qiyaaso, nooca 12.5, waa la heli karaa, haddii aad rabto inaad ku bixiso sheyga mar labaad, isla markaana, lumiso macaamiisha. PcAnywhere waxay leedahay, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay isu rogtay qayb ka mid ah qashinka, barnaamijyada aadka u liita iyo tijaabinta, la'aanta lahaanshaha iyo mas'uuliyadda ayaa dhammaantood aad ugu muuqda qof aniga oo kale ah oo summaddiisu tahay 8 luqadood oo kala duwan isla markaana taageera nidaamyada nolosha.
Oktoobar 22, 2008 at 4:57 PM
Shirkadeena ayaa u isticmaashay pcAnywhere meel fog maamulka muddo ku dhow labaatan sano hadda. Cayayaanka ku jira noocyadii u dambeeyay (11.0 iyo wixii ka sareeya) ayaa sii kordhayay jahwareerka, waxaana ogaanay in nooca Enterprise-ka ee RealVNC uu isla shaqo qabanayo, isagoo adeegsanaya agab ka yar nidaamka, lacag ka yar halkii rakib… mana laha xanaaqa. oo keliya in aan martigeliyo hal fadhi markiiba.
Si aad u faahfaahiso: Isticmaalka muuqaalka “Call Remote” ee bogga pcA meel kasta oo martigeliye uu ku xirmayo macmiilka, taas oo ah in isla Remote uusan lahaan karin 2 Marti “isku yeer” isla waqtigaas. Ahaanshaha koodhka shabakadda, tani macno iima samaynayso aniga. VNC ma haysato arintan, waxayna umuuqataa inay “uun shaqeyneyso”, xitaa mashiinada aan pcA meelkasta xitaa ku rakibmi doonin.
Nooca Enterprise ee RealVNC wuxuu ka shaqeeyaa Vista iyada oo aan wax dhib ah laga qabin, in kasta oo nooca "bilaashka ah" ee bilaashka ahi aanu adeeg ahaan ugu shaqeyn karin Vista (si fiican ayuu u dhagaystaa, laakiin isla markiiba dib ayuu u cusboonaysiiyaa isku xidhka markasta oo aad isku xidho) Intaas waxaa sii dheer, VNC waa runti iskutallaab ah waxayna ka shaqeysaa "sanduuqa" sanduuqyada garaafka Linux, halka martigaliyayaasha pcAnywhere ay maamuli karaan oo kaliya Windows (tm).
Wow, tani waxay u egtahay sidii koronto. Si kastaba ha noqotee, kuma xirna RealVNC si uun marka laga reebo inaan ahay macmiil aad u qanacsan, ka dib markii khaladaadka iyo qashin-qubka pcAnywhere ay nagu qasbeen inaan helno badeecad maamul oo fog ah. Weli waxaan ku isticmaalnaa pcA meel kasta saldhigga macaamiishayada rakiban, laakiin kama iibsaneyno wax ruqsad cusub iyaga.
Febraayo 11, 2009 saacadu markay tahay 12: 53 AM
Weyn, noocyada ka hor 12.1 kuma shaqeyn doonaan Vista, markaa waxaan iibsaday 12.1. Waxaan ogaaday in aysan jirin wax balastar ah oo 12.1 ah, runti, uma maleynayo in 12.1 xitaa la taageerayo mar dambe, in kasta oo ay suuqa ku jirtay waqti hore, laakiin waa lagugu soo dhaweynayaa inaad baxdo oo aad bixiso nooc kale 12.5 hadda.
Mar 16, 2009 at 7: 36 AM
mab, waa inaad awoodid inaad heshid 12.5 bilaash. Cusboonaysiinta aan kordhin lambarka nambarka weyn (12) badanaa waa bilaash. Waxay u badan tahay inaad la xiriirto taageeradooda inkastoo, waa xanuun laakiin waxaan kor ugu qaaday 12.0 ilaa 12.1 sidan.
Sep 24, 2009 at 5: 05 PM
Xitaa 12.5 waa flakey. Waa inaan hoos u dhigaa hababka durugsan ee garaafyada si aan u bilaabo ama ugu kalsoonaado isku xirnaanta. Waqti uun baan sugayaa waxaanan qiimeynayaa VNC beddel ahaan. PCA hadda waa dhimatay inta aan ka walwalsanahay. Waxay umuuqataa Symantec inaysan taageerin oo aysan dan ka lahayn.
Haddii qof ogyahay wax cusboonaysiinta 'Symantec PCA' ah, xirmada adeegga, iwm 12.5 waan hubaa inaan wax ka ogaado.